ကြယ်နှင့်အတူ | ကြယ်ရောင်မှတ်စု
တမ်းတမိတဲ့ ကြယ်လေးရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ခံစားမိသမျှ အရာအားလုံးပါပဲ....
အဲဒီနေ့လေးဆီကပေါ့ ရသတွေ အရည်ဖျော်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကြယ်လေးက ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။
စိတ်တွေခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်နဲ့ အဲဒီနေ့ရဲ့ rhythm တွေနဲ့အတူ ကခုန်ပျော်မြူးတော့ ဘယ်သူခေါ်ခေါ် ပြန်မထူးမိဘူး။
အဲဒီနေ့လေးမှာပေါ့ ကြယ်လေးက နက္ခတ်တေးသွားတွေနဲ့ နွေးထွေးတဲ့လက်တစ်စုံမှာ အလင်းစတွေတပ်ပြီး ကျွန်တော့်မွန်းကြပ်မှုတွေကိုဖြေဖို့ မောဟတွေကို သေစေခဲ့တယ်။
အလင်းစတွေရယ် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်ခူးဆွတ်မိတဲ့ အမှောင်တွေမှာ ကြယ်လေးကသာ အလင်းစတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့ရူးသွပ်မှုတွေကို လူလားမြောက်စေခဲ့တယ်။
ရက်စွဲအသေတွေရေ.....နေခဲ့လိုက်တော့။ တကယ်တော့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုရဲ့ ရင်ဝှက်တေးဆိုတာ နှစ်ကိုယ်တူဘဝတွေရဲ့ အဝေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကြယ်လေးရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် တွန့်ခေါက်နေတဲ့ ရင်ထဲက တောင်တန်းလေးလည်း ပြေလို့ ဇာပနအသေတစ်ခုလို နိဂုံးချုပ်လို့ရတယ်။
တစ်နေ့တော့ ရောက်နိုင်ပါစေ။ ကြယ်လေးရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကတစ်ဆင့် ဘဝရဲ့ ကံဆင့်ဆင့်ကို ရဲရင့်ခြင်းတွေနဲ့ ဆွဲဖွင့်လိုက်ချင်ပါရဲ့။
ကဲ.....အရှေ့ဆီမှာ ဆိုတာဘာလဲ။ မျက်နှာပေါ်မှာ ဘာတွေတင်ကြမလဲ။ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ချစ်ခြင်းတွေကို တန်ဆာဆင်မလား။ မျက်နှာများတဲ့ ကံဇာတာတွေထက်မှာ တစ်ယောက်ရဲ့တေးသွား တစ်ယောက်ကြားဖို့ ဘယ်မြို့ရိုးရှေ့မှာ မားမားရပ်မလဲ။
ကြယ်လေးရေ.......တွေးမရခြင်းတွေက လက်မှိုင်ချဖို့မလို ကြိုဆိုချင်နေတဲ့ နေ့စွဲတွေအတွက် နေအထွက်မှာ အပြုံးတွေစက်လက်နဲ့ တို့........ပြေးထွက်ကြပါစို့ ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Saturday, November 06, 2010
try ur best.
:).....ကြယ်လေးကို လွမ်းဆွတ်ရင်း အလွမ်းတေးဖွဲ့ ဆို...
လွမ်းချင်းအိုအိုတွေနဲ့ လွမ်းကဗျာတွေ ပျိုးပျိုး ရင်း နေ့ စွဲတွေကို
အပြုံးမပျက် ကြိုနေခဲ့တဲ့ ကြယ်ကိုလွမ်းတဲ့ ကြယ်လွမ်းသူ...
နေ့ သစ်တွေတိုင်းမှာ မျှော်လင့်ခြင်းသစ်တွေနဲ့ ကြယ်လေးကို ငင်ယူနိုင်
ကြယ်တွေက ကြယ်လွမ်းသူအတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် ဖြစ်ပါစေ
မျက်နှာများတဲ့ ကံဇာတာတွေထက်မှာလည်း ကြယ်လေး လှမ်းမမှားပဲ ကြယ်လွမ်းသူဆီရောက်လာနိုင်ပါစေ..
ကြည့်ရတာ အကြွေးရှင်က တကောက်ကောက်လိုက်နေပုံရတယ်..
ကြယ်ကလေးတော့ ခေါ်မသွားပါနဲ့ ထားခဲ့ပါ။
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရော ၊ ဘလော့ဂ်နာမည်ရော ၊ တန်းပလိတ်ရော ၃ ခုလုံး ကြည့်လိုက်တာ မျက်လုံးထဲမှာ ကြယ်တွေပဲ မြင်နေတော့တယ်။
"ကြိုက်၏မကြိုက်၏" တဲ့။ ကိုကြီးကိုမောင်လေး က တဂ်ထားတယ်။ ရေးမယ် ရေးမယ်ပေါ့လေ။ ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်မှာလည်း ကြိုက်တာလေးတွေရော မကြိုက်တာ...
ပြန်ပြီလား သူငယ်ချင်း.... ခရီးပြင်းနှင်ခြင်းသီဝရီမှာ အပြန်ဟာ အစဖြစ်နိုင်သလို အလာဟာလည်း အစဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြန်ပြီလား သူငယ်ချင်း.... ချစ်...
ကြယ်ရေ..........တမ်းတမှုတွေကိုသာချိန်ဆလို့ရရင် တိမ်တိုက်အစအနတွေဆိုတာ ဟိုး.....အောက်မှာပေါ့ ကြယ်ရေ.........ခြောက်ကပ်ကပ်နေ့ရက်တွေကို ငါကျော်ဖြ...
တွေးမိသမျှ ချရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတယ် :(
ကဗျာရဲ့" ငါ "
ကျွန်မရေးဖြစ်ခဲ့သော/ ရေးနေဖြစ်သော ကဗျာများ - နိူဝင်ဘာ ၂၀၁၈ - (၁) "ငါး" တချက်ပဲ မိခဲ့ဖူးတာ အကြေးခွံကို လှန်ချွတ်ချခဲ့လည်း နာကျင်ကျန်ရစ်ဆဲ အာခေါင်ကို ထုတ်ချင်းဖောက်သွားပြီးတဲ့နောက် ရေထဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တသက်စာ...
Planting Bok-choy.... - Last week ago, I went to the plants shop for making in-door plant pot of mother-in-law-tongue for our show flat. So I decided to buy some seeds of tomato...
The Man Who Knew Infinity - 1+2+3+4+… 1 ကနေ 100 အထိ ပေါင်းရင် အဖြေ ဘယ်လောက်ရမလဲ။ သင်္ချာမှာ Arithmetic Series သင်ဖူးတဲ့သူက ခပ်လွယ်လွယ် အဖြေ ထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို 100 အထိ မဟုတ်ဘဲ...
Amsterdam_2018 - [Zawgyi] အမ်စတာဒမ်သို့ မိမိကားဖြင့် အလည်သွားမည်ဆိုပါက ကားရပ်နားမည့် နေရာဈေးကြီးပါသည်။ မြို့တွင်းရပ်နားပါက တနာရီကို ယူရိုငွေ ၄ ယူရိုပေးရပါမည်။ အကယ်၍ အမ်စတာ...
ဖက်ထုပ်ဆီချက် - ဒီနေ့ည ဖက်ထုတ်ဆီချက်လေး ရှိတာလေးတွေနဲ့ ဖြစ်သလို လုပ်စားတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်လုပ်ရင် မေ့သွားမှာစိုးလို့ သတိရတုံးလေး ချရေးလိုက်ဦးမယ်။ ဖက်ထုပ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အ...
လစဉ် ဟောစာတမ်း ( မေလ-၂၀၁၃ ) - ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ-၏ တပည့်ရင်း ဆန်းဗေဒင် အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ လက္ခဏာ ပညာရှင် ဆရာအောင်ငြိမ်းမြတ်-၏ ခုနစ်ရက် သား-သမီးများအတွက် လစဉ် ဟောစာတမ်း ( မေလ ၂၀၁၃ ) ဆရာ အောင်ငြိမ်းမြတ...
အလွမ်း.. - လာကြည့်လှည့် ချစ်သူ.. နင် ဖွင့်ခဲ့တဲ့ တံခါးလေးတစ်ချပ် အထီးကျန်နေတယ်.. နွေးဦးကို ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ ငါ့မှာ နွေးထွေးမှုလေးတစ်ခုတောင် မပေရေခဲ့ပါဘူး.. မိုးတေ...
ဝေးလွှင့် ကြယ်စင် - “တာရာ ဒီနေ့ ၀ါဝါ၀င်းလဲ့ ရဲ့ မွေးနေ့ဟ.. ” “အော် ဟုတ်လား .. အင်း ဒီတော့ နင်ကဘာပေးမလို့လဲ နယုန် ” သူမရဲ့ အမေးစကားအဆုံး “ဘာပေးရမှန်း ငါလဲမသိဘူး.. သူက နံမည်...
မြန်မာပြည်ကိုကွယ် လွမ်းတယ် - ကျောင်းစဖွင့်ကတည်းက ပေးလိုက်တဲ့စာတွေ လုပ်ရတာ ကျွန်မအတွက် အားလပ်ချိန်တောင် မရှိသလောက်ပါပဲ .. ဒီ နှစ်ပါတ်တာ ကျောင်းတက်ရက်တွေထဲမှာ တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတ...
မှော် ရုံ တော
ဖူးလ်ဗားရှင်းမရတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ လာထား - ဒီမှာ ကလစ်လိုက်ပါ
Copyright (c) 2011 ကြယ်ရောင်မှတ်စု. Design by Marquee Letters - Web Design Chicago, Changeable Letters , celebrity clothing